ဘာသာစကားတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်(၄)ခု
သင်တန်းသွားဖို့ အချိန်မရတဲ့သူတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး သင်တန်းမတက်ချင်သူတွေအတွက် အိမ်မှာနေရင်း ဘာသာစကား သင်ယူနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ဝေမျှပေးသွားမှာပါ။
အင်တာနက်ခေတ်မှာ သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေကို လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် သင်ယူတာမျိုးထက် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ သင်ယူတာမျိုးတွေ ခေတ်စားလာပါပြီ။ Duwun ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာရော အွန်လိုင်းကနေ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို လေ့လာနေတာမျိုးရှိလား? သင်တန်းသွားဖို့ အချိန်မရတဲ့သူတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး သင်တန်းမတက်ချင်သူတွေအတွက် အိမ်မှာနေရင်း ဘာသာစကား သင်ယူနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ဝေမျှပေးသွားမှာပါ။
ကဲ ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေလည်း ဆိုတာ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၁) Duolingo (https://www.duolingo.com/)
Duolingo က Website တင်မကဘဲ Mobile Application ပါ ရှိတာပါ။ Duolingo Server ပေါ်မှာ လက်ရှိ ဘာသာစကားသင်ယူနေတဲ့ လူဦးရေကတော့ သန်း ၃၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ US အခြေစိုက် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ Luis von Ahn နဲ့ Severin Hacker တို့က တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ လက်ရှိ Duolingo မှာ ဘာသာစကားပေါင်း (၃၀)ကျော်ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားတွေကို အခမဲ့ သင်ယူနိုင်ပြီး အကယ်၍ Premium Service ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Babbel (https://www.babbel.com/)
နောက်တစ်ခုကတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံ အခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူလည်း Online website ရော Mobile Application ပါ ရှိပါတယ်။Dutch, Danish, English, French, German, Indonesian, Italian, Norwegian, Polish, Brazilian, Portuguese, Russian, Swedish, Spanish နဲ့ Turkish ဘာသာစကားတွေကို သင်ယူနိုင်မှာပါ။ ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေ အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားအလိုက် E-Book တွေကိုလည်း Babbel မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(၃) Mango (https://mangolanguages.com/)
Mango ကတော့ US အခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ Mango မှာ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ course ပေါင်း (၇၁) မျိုး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားလေ့လာသူ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်သလို Educators, Businesses, Libraries, Government စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလိုက် ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခမဲ့ လေ့လာနိုင်သလို Premium Service ယူချင်ရင်တော့ တစ်လစာအတွက် USD $20 နဲ့ ဝယ်ယူလေ့လာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၄) Busuu (https://www.busuu.com/)
သူကတော့ နည်းနည်းလေးထူးခြားပါတယ်။ Busuu မှာ ဘာသာစကားလေ့လာတာတင် မကဘဲ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားကို ပြောဆိုတဲ့ Native Speaker တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရင်း လေ့ကျင့်နိုင်ဦးမှာပါ။Busuu က Website အပြင် IOS နဲ့ Android app တွေလည်း ရှိပါတယ်။ Busuu Website နဲ့ App ကို အသုံးပြုပြီး ဘာသာစကားလေ့လာနေသူပေါင်း သန်း(၅၀)ကျော်ရှိပါတယ်။ Busuu မှာတော့ ဘာသာစကား အမျိုးအစား (၁၂)မျိုးလေ့လာနိုင်မှာပါ။
ကဲ ဒါကတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဘာသာစကားသင်ယူလိုသူတွေ၊ အိမ်မှာနေရင်း ကိုယ် အားလပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဘာသာစကားလေ့လာလိုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက်(၄)ခုကို ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ပေးထားတဲ့ Link တွေကနေ သက်ဆိုင်ရာ ဝက််ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ Duwun စာဖတ်ပရိတ်သတ်ထဲမှာရော အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဘာသာရပ်တွေကို သင်ယူနေတဲ့ သူတွေရှိတယ်ဆိုရင် ဘာတွေ သင်ယူလေ့လာနေလဲဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို မျှဝေပေးသွားပါဦး!!!